टुट्न सक्छ तपाईको रिलेसन, यदि यस्ता लक्षण देखिएका छन् भने - Naya Pusta
टुट्न सक्छ तपाईको रिलेसन, यदि यस्ता लक्षण देखिएका छन् भने
तपाईको जीवनमा पक्कै पनि त्यो समय थियो होला, जब पार्टनरको नजर निरन्तर तपाईमाथि पथ्र्यो । तर के अहिले त्यस्तो अवस्था बदलिसकिएको छ ? क्या अहिले उनी तपाईलाई प्रेमपूर्वक हेर्दैनन्/हेर्दैनिन् ? यदि अवस्था यस्तो हो भने तपाई सोच्नुहोस् कि अब तपाईको पार्टनरको मन बदलिसकिएको छ । तपाईको रिलेशन खतरामा छ ।
इङ्लिस अल्फावेट अनुसार अब थाहा पाउनुहोस् आफ्नो स्वभाव र भविष्य